Mugabe oo “qabriga kasoo dhex hadla” walina si dadban u maamula dalkaasi Zimbabwe xilli uu geeriyooday 2019-kii – Calanka.com
Mugabe oo “qabriga kasoo dhex hadla” walina si dadban u maamula dalkaasi Zimbabwe xilli uu geeriyooday 2019-kii
Hoggaamiyihii muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe, oo geeriyooday sanadkii 2019, ayaa u muuqda mid xukunkiisii uu weli saameyn ku leeyahay dalkaas.
Qaraabada Robert Mugabe ayaa sheegay in markii uu geeriyoonayay uu qabay ciil maaddaama laga tuuray xukunka uuna xilka la wareegay Madaxweyne Emmerson Mnangagwa – ciilkaas uu qabay, ayay aaminsan yihiin, xitaa dhimashadiisa kaddib inuu dhibaato ku keenayo dalkaas.
Sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah bulshooyinka Afrika, qofka dhintay wuu soo hadli karaa, iyadoo “ruuxaantiisa ay iska caabbiso wax walba oo caqabad ku ah”. Sidaas darteedna, waxay ku talinayaan in la iska ilaaliyo si aysan dhibaato uga imaan.
Haddii la is barbar dhigi lahaa dabeecaddii Mugabe ee markii uu noolaa, iyo ruuxaanta meydkiisa ay bulshooyinkan aaminsan yihiin, waxay la mid noqon lahayd holaca foolkaanadii dhowaan ka qaraxday Buurta Nyiragongo ee Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo, taas oo afka u dhiganeysay wax walba oo ka hor yimaada.
Mr. Mugabe wuxuu heystay madhabta Kaatooligga, qeyb ahaanna waxaa soo barbaariyay kaniisado. Balse kama uusan tegin afkaarta dhaqan ee bulshadiisa.
Siyaasadda iyo aaminsanaanta awoodda ruuxaanta dadka dhintay
Qubuuraha qaranka ee dalkaas Zimbabwey oo aalaaba lagu duugo geesiyaasha dagaalka ee xilliyadii gobannimo doonka, ayaa la sheegay in Mugabe uu booqan jiray isla markaana barakeysan jiray qabriga Mbuya Nehanda, oo uu dhammaadkii qarnigii 19-aad dilay gumeystihii Ingiriiska.
Tani waxay sii adkeystay fekerka ruuxaanta qofka dhintay ee ay aaminsan yihiin bulshada dalkaas.
Markii uu Mugabe dhintay, Madaxweyne Mnangagwa wuxuu doonayay in 95 sano jirkii uu xilka kala wareegay lagu aaso qabri gaar ah oo ku yaalla qubuuraha geesiyahaasha, balse waa laga diiday.
Tani waxay u suurto gelin lahayn inuu booqdo qabriga, uuna barakeysto awooddii siyaasadeed ee Mugabe, inkastoo uu sanadkii 2017-kii xilka ka tuuray, isagoo ka gilgilanaya damacii marwadii koowaad ee hore Grace Mugabe ee ahaa inay noqoto madaxweynaha xiga ee Zimbabwe.
Mrs Mugabe ayaa fursaddaas u diidday Mr Mnangagwa, iyadoo ku adkeysatay in Mugabe uu ku dardaarmay in lagu aaso guriga qoyskiisa oo ku Zvimba, meel u dhow qabriga hooyadiis Bona.
Joost Fontein oo ah khabiir buug ka qoray fekerkan ay aaminsan yihiin bulshooyinka Afrika qaarkood, ayaa sharraxaad taas ka duwan ka bixiyay sababta ay Grace Mugabe u diidday in seygeeda lagu aaso qabuuraha uu doonayay Mnangagwe.
Ma aysan dooneyn in lagu aaso meesha ku dheggan qabriga Sally [xaaskii hore ee Mugabe] sababtoo ah way ogtahay in Sally ay weligeed ka caansanaan doonto.
“Balse sidoo kale waxay dooneysaa in maamulka cusub ay ka hor istaagto xaqa ay u leeyihiin in Mugabe lagu aaso qabuuraha geesiayasha,” ayuu yiri.
Arrintan ayaa xiisad abuurtay kaddib markii bishii la soo dhaafay uu hoggaamiye-dhaqameed ku sugan Zvimba uu xukmiyay in Mrs Mugabe ay jebisay dhaqanka iyadoo seygeeda ku aastay beerta gurigiisa.
Mrs Mugabe – oo la sheegay inay xanuunsaneyso, ayna ku sugan tahay Singapore – kama aysan qeyb gelin dhegeysiga dacwaddeeda, balse hoggaamiye-dhaqameedkan ayaa ku xukumay inay ganaax ahaan u bixiso shan lo’ iyo hal ri’.
Waxaa kale oo la sheegay in Grace Mugabe, xaaska Mugabe, ay ka baqeyso in cadowgeeda ay soo faagaan lafaha seygeeda ayna ku sixraan iyada iyo carruurteeda.